လေပြေ (puicool): Year of Testing and Blessing 2011
Year of Testing and Blessing 2011
ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း ၁၇း၅-၈ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား လူကိုကိုးစား၍ သတ္တ၀ါကိုအမှီပြု သဖြင့် စိတ်နှလုံးထဲ၌ ထာဝရဘုရားထံတော်မှ ထွက်သွား သောသူသည် ကျိန်အပ် သောသူဖြစ်၏။ ထိုသူသည် လွင်ပြင်၌ ရှိသောသစ်ပင်ခြောက် ကဲ့သို့ဖြစ်၍ ကောင်းကျိုး ရောက်ကြောင်းကို မသိရ။ အဘယ်သူမျှ မနေသောဆား မြေ၊ သွေ့ခြောက်သောလွင်ပြင်၌ နေရလိမ့်မည်။ ထာဝရ ဘုရားကို ကိုးစားသောသူ၊ ထာဝရဘုရားကို မိမိကိုးစား စရာအကြောင်းဖြစ်စေသောသူသည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ခံအပ်သောသူဖြစ်၏။ ထိုသူသည်ကား ရေရှိသော အရပ်၌စိုက်၍ မြစ်နားမှာအမြစ်ဖြာသဖြင့် ပူသောအရှိန်ရောက်ကြောင်းကို မသိ၊ အရွက်မညှိုးနွမ်း၊ မိုးခေါင်သော ကာလ၌ စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲ၊ အစဉ်အမြဲအသီးကို သီးတတ်သောအပင်နှင့်တူ၏။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ဟာ ကြီးပွားတိုးတက်မယ့် နှစ်ကာလဖြစ်တယ်လို့ ဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ဆရာကြီးက ပြောကြပါတယ်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်ဟာ ဘုရားသခင်ကို သင်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ ကိုးစားသလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်မယ့် နှစ်ကာလဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်.။ ဘ၀အတွက်အကောင်းဆုံးအရာတွေကို မျှော်လင့်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်အခွင့်ပေးလို့ ကြုံတွေ့ရမယ့်စစ်ဆေးမှုတစ်ချို့အတွက်လည်း ပြင်ဆင် သင့်ပါတယ်။ ဒီနှစ်သစ်ထဲမှာ ဘုရားသခင်ကိုဘယ်လောက်ထိ ယုံကြည်ကိုးစားတယ်ဆိုတာကို စစ်ဆေးပါ လိမ့်မယ်။ အခြေအနေတွေ၊ အခက်အခဲတွေ၊ ပြဿနာတွေကြုံလာရင် ဘယ်သူ့ကိုအားကိုးသလဲဆိုတာကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရမယ့် အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်၊ ကြုံတွေ့ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံ အရ ပတ်ဝန်းကျင်က ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး(သို့) အရာတစ်ခုခုကိုကိုးစားနေမိပြီး ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးပိုင်တဲ့ ဘုရားသခင်ကို မျက်ကွယ်ပြုထားမိရင်တော့ ကောင်းချီးတွေလွတ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ပညာရှင် အများစုကတော့ ၂၀၁၁ခုနှစ်ဟာ ရုန်းကန်အားထုတ်ရမယ့် နှစ်ကာလလို့ တွက်ထားကြပါတယ်။ လူ့မျက်စိအမြင်နဲ့တွက်ချက်ကြည့်ရင်တော့ တွက်ချက်မှုတွေဟာနီးစပ်နေပါတယ်။ ယုံကြည်သူများအနေနဲ့လည်း လောကကြီးထဲမှာ အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက် လောကသားအားလုံး ကြုံတွေ့မယ့် အရာကို ရှောင်လွှဲလို့တော့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သူ့ကို ကိုးစားနေ သလဲဆိုတာက ကိုယ့်ဘ၀ကိုအဖြေထုတ် ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ မျက်မြင်လူတွေကို ကိုးစားနေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားနေတာလားဆိုတာ ဝေခွဲရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကာလတွေမှာ ကိုယ့်အသက်တာကို ကိုယ်ပြန်လည် ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘာမှရေရေရာရာနဲ့ အမှုပြီးမြောက်ခဲ့တာတွေ မရှိသလောက်ပဲဖြစ်ကြမှာပါ။ တိတိကျကျဖော်ပြရလောက်အောင် ထူးခြားတဲ့ အသက်တာမျိုးဘ၀မှာ အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။ သူများတွေကြုံသလို ကိုယ်လည်းကြုံ၊ သူများတွေကျဆင်းသလို ကိုယ်လည်းကျဆင်း၊ သူများတွေအဆင်မပြေသလို ကိုယ်လည်းအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရတာပဲ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို နှစ်သစ်ထဲမှာ ဆက်လက်ယူဆောင်အသက်ရှင်သွားဖို့တော့ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော် မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ကျမ်းစာကတော့ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားသောသူဟာ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမယ့်သူဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သာမန်သူများတွေနည်းတူခံစားရမယ့် ကောင်းချီးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ သူများတကာထက် ထူးခြားတဲ့ကတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ကောင်းချီးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်နားမှာစိုက်တဲ့အပင်လို အမြစ်ကစပြီး ရှင်သန်နေပါလိမ့်မယ်။ အချိန်တိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့ အာဟာရ အားလုံးကို လုံလောက်စွာရတဲ့သူကဲ့သို့ ဖြစ်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေပဲဖြစ်ပျက်နေပါစေ၊ သူကတော့ စိမ်းလန်းစိုပြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ပူသောအရှိန်ရောက်ကြောင်းကို မသိ
ကိုယ့်အပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ပဲပူနေပါစေ၊ သူကတော့ မမှုဘူး။ ပူလွန်းလို့ခြောက်သွေ့နေကြပေမယ့် သူကတော့ ပူနေမှန်းတောင်မသိရဘူးတဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပူပင်သောကတွေ၊ ခက်ခဲမှုတွေဘယ်လောက်ပဲ ၀န်းရံနေပါစေ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားတဲ့သူတွေကတော့ ဒါတွေကိုလုံးဝမခံစားရဘူး။ သူများတကာတွေ ပူနေတဲ့အချိန်မှာတောင် အေးဆေးစွာနေနိုင်မှုကို ရရှိစေပါတယ်။
အပင်တစ်ပင်ရဲ့သဘာဝအရ တစ်နှစ်မှာတစ်ကြိမ်လောက်တော့ အရွက်ညှိုးနွမ်းကြွေကျကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားတဲ့သူတွေကတော့ သဘာဝထက်လွန်စွာ အရွက်တောင်ညှိုးနွမ်းတဲ့အခွင့်ကို ဘုရားကမပေးဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်နှာငယ်စရာ၊ အားငယ်စိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေရှိနေရင်တောင် သူ့ကိုတော့ အဲဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အခွင့်မပေးဘူး။
အဆိုးရွားဆုံးကာလကို ကြုံရပြီး၊ နေရာတကာမှာခြောက်သွေ့၊ ပူပြင်းငတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင် မစိုးရိမ်ရဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူများတကာတွေအသက်ဆက်ဖို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ မှာတောင် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ထာဝရဘုရားက တာဝန်ယူထားပါတယ်။ သူများတကာတွေ ရုန်းကန်နေရတဲ့ကာလမှာ ကိုယ့်ကိုတော့ ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ပတ်ရစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီပေါ်သီးတဲ့အပင်မျိုးကဲ့သို့တောင် မဟုတ်ဘဲ၊ ၁၂ ရာသီအစဉ်အမြဲသီးစေမယ်လို့ ကတိပေးထား ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်သလောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ ထာဝရဘုရားကို ကိုးစားနေသရွေ့ အသီးတွေက အလိုလိုသီးပွင့်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ရှိသမျှကာလပတ်လုံး အသက်တာမှာ အသီးသီးတဲ့အခွင့်ကို ပေးနေမှာဖြစ်တယ်။ ကောင်းချီးကို ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ခံစားရမှာမဟုတ်ဘဲ ဆက်တိုက်ခံစားရတဲ့အခွင့်ကို ဘုရားသခင်ကပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းစာကတော့ အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကို သင့်ရှေ့မှချထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဘာကိုရွေးချယ်မလဲ။ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာမှဖြစ်လာ မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ထာဝရဘုရားကိုလုံးလုံးလျားလျားကိုးစားရင် ကောင်းချီးခံစားရ မှာဖြစ်ပြီး၊ လူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပဲ ဆက်လက်ကိုးစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကျမ်းစာကပြောထားတဲ့ အတိုင်း ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာပဲခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအရာကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ဘုရားသခင် အယောက်စီ တိုင်းကို စကားပြောပါစေ။
Posted by puicool at 7:56 PM
အောင်မင်းထွန်း (ခ) ပွီးပွီး
(Thailand Std Time)
Myanmar Std. Time
chat FX casino Online casino counters
Some Good Blog for Visit
သန်းရွှေနှင့် ဂေါတာမ လုပ်တာမဟုတ် မဟုတ်တာလုပ်
၄၇လက်မရှည်တဲ့ လူပေါင်ရိုးတဲ့လား? အဟတ်အဟတ်
အဆွယ်ကောင်း၍ ခိုအောင်းသူများသို့ (၆)
Welcome to Internet Journal Online - Internet Journal
ဇော်ဂျီဖောင့် (Zawgyi Font)
ဧရာဖောင့် (Ayar Font)
EPL Score Box
La Liga Fixtures & Results
Serea A Standing
Serie A Italy Fixtures & Results
Definition: Live in or as if inatent.
Synonyms: camp, camp out, encamp, tent
A gamester, the greater master he is in his art, the worse man he is.
puicool@2011. Watermark theme. Powered by Blogger.